Yintoni iPowardarine Powder: Izibonelelo ze-8 zeKararine | AASraw
/Blog/Cardarine , GW 501516/Yintoni i-Super Cardarine? / IiNzuzo ze-8 zeCarardarine
ezaposwa ngomhla 03 / 05 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Cardarine, GW 501516.
Yintoni i-powder Cardarine (i-GW 501516 powder)?
ICardiarine powder, eyaziwa nangokuthi yi-GW 501516, yikhemikhali yophando eyenziwa kwi-1990s ukukhusela kunye nokuphilisa isisu se-colon, i-prostate, namabele. Izifundo ezenziwe kwii-2000 zakuqala ziye zafumanisa ukuba i-GW 501516 kunye nezinye i-PPAR ze-agon ziye zakwazi ukuyeka ukuphazamiseka kwemizimba ezinjengeentlungu kunye nesifo sikashukela ngokwemibala ethile yemfuza.
Njengoko uphando luqhubeka lukhula, abaqulunqwa ngumzimba babambelela ngokukhawuleza kwi-GW 501516, bayibiza ngokuthi "ukunyamezela kokunyusa ukunyusa."
Kananjalo, ikhono likaCarardine lokutshisa amafutha amaninzi, ukuphucula ukuphucula nokunyusa ngokunyanisekileyo ukunyamezela kuye kwenza le mveliso ibe yinto enkulu kwisigidi somqhubi ngamnye PCT. Ngaphandle kwemiphumo emibi yecala efunyenwe kwiminyaka eyi-20 edlulileyo, akumangalisi ukuba kutheni i-GW 501516 ibe ngumlando kwizemidlalo nakwizemidlalo. Ngoku ke masiqwalasele.
Inkcazelo yeCarardar powder
I-Cardarine Powder, luhlobo lwe-Light yellow crystal powder. Njengezinto ezibonakalayo zeCarardarine, i-powder cardarine i-powder isithandwa phakathi kwakha umzimba, ngakumbi ukuhlambuluka I-Cardarine, ineempembelelo ezingaphantsi, yenza okuhle emzimbeni wakho, inceda ukulahlekelwa ngamanqatha.Uye, ukuba ndiyithenge I-cardarine powder yokuthengisa, okanye ukusebenzisa i-lab, ndakhetha ukukhetha ukuthenga i-Cardarine powder, ukhethe umthengisi weCardiarine onokuthenjwa othembekileyo kwaye uhlale uxolo oluqinileyo.Ienkcukacha zeCardiarine ngobuninzi befowuni inkcazo kwi AAS njenge:
Iyiphi i-Cardarine Powder esetyenzisiweyo?
I-Cardarine Powder ikulungele yonke into! Uncedo oluxhamlayo luncedo kuyo mhlawumbi sisizathu esivakalayo sokusebenzisa le mveliso. Akukona nje ukubonakaliswa ukwandisa ukunyamezela kwizifundo zesayensi, kodwa xa uzisebenzisela wena uya kubona ukuba iziphumo aziyinto emfutshane! Ukuba ungumdlali we-cardio junkie okanye nje ngokuba uhlalise, ukwandisa ixesha lakho lokugijima. Iiseshoni zakho zokuphakamisa izisindo ziya kwandiswa ngokukhawuleza, uya kuziva unamandla kwaye ufikelele ekugqibeleni ufumane umsebenzi omningi owenziwe ngaphambi kokuba uhambe ngaphandle kwezemidlalo yonke imihla.
Ngokuqinisekileyo, ukulahlekelwa kweoli kunomxholo wezona zizathu zokuba kutheni abantu abaninzi bathanda iKadarine Powder kangaka. Izibilini kunye nemithanjeni ziyabonakala ngokugqithiseleyo kwaye uhambo lwakho lokulahlekelwa kwintsizi luba lula kakhulu, ngaphandle kweempembelelo ezininzi ezinokutsha kunye neziyobisi ezinokuthi zincinci. Ukulahleka kwe-Fat kwi-Cardarine Powder kubangelwa ukunyuka kwe-glucose ukunyuka kwesisu. Okubalulekileyo, usebenzise kangcono izondlo ozidlayo imihla ngemihla kunye nokunciphisa inani lama-carbohydrate okanye amafutha agcinwe njengethambo le-adipose. Ngenxa yoko, ikararine ayigcini nje evuthayo kunye ne-anti-catabolic, kodwa yinto encinci ye-anabolic ngokunjalo.
Usebenza njani ngeCarardine Powder?
I-Cardarine Powder ngokuqhelekileyo i-Burnning Fat.
I-GW 501516 powder yi-Peroxisome Proliferator-Activator-delta-delta (PPARδ) i-agonist.
I-PPARδ yi-receptor yamachikliya yamandla enyukliya elawula ezininzi iinkqubo kunye nemisebenzi ebalulekileyo yomzimba, kuquka i-fatty metabolism.
I-PPARδ i-agonists (izinto ezenza i-PPARδ) ivuselele indlela ngendlela yethu imizimba ichithe amandla ngayo ngokwenza i-fatty acids umthombo okhethiweyo wamafutha, ngokuchasene ne-glucose kwi-carbohydrates.
Uyabona, umzimba womntu unemisebenzi ye-3 ukuhlangabezana neemfuno zayo zamandla:
I-glucose (Ukususela kwi-Carbohydrates)
I-Acids Acids (Ukusuka kwi-Fat Stored)
Amino Acids (Ukusuka kwiProtheyini)
Kwiimeko eziqhelekileyo, i-glucose iyimithombo yamandla ekhethiweyo kuba kulula kakhulu ukufumana amandla avela kunamafutha e-fatty okanye amino acids. Umzimba awufuni ukusetyenziswa kwamaprotheni njengomthombo wamandla kwaye uguqulela kuphela kwi-acids fat to power when i-glycogen (i-glucose egciniweyo) iphantsi, njengokuba kunjalo xa uhlala kwindawo yokuzila.
Njenge-PPARδ agonist, i-GW 501516 powder iyakwazi ukubunjulisa umzimba ukuba ukhethe i-acids fat as a source fuel. Ngoko ke kulula ukubona ukuba kutheni isetyenziselwa ngabadlali bomzimba kunye nabagijimi kuyo yonke indawo. Yingakho i-GW 501516 iyitshisa amanqatha.
Kwakhona ukunyamezela nokunyamezela, kodwa iziphumo ezinokuthi zithandwa njengotyebileyo.
Izibonelelo ze-8 zeKardiarine Powder
I-1) I-Cardarine Powder inceda ukunciphisa umzimba
I-GW 501516 powder iqalisa iPARAR, enokunyusa ukuphuka kwama-acid acids kunye nokusetyenziswa kwamandla emzimbeni. Oku kunokukunceda ukuphatha ubunzima. Olu unyango luya kuqinisekisa ukunyuka kwesisindo ngenxa yokutya kwimijimi. Ngokufanayo, ukuhluthwa kwe-GW 501516 ukuhluthwa kwe-glucose ngesibindi kunye nokwenza i-insulin ithinteke kwiimiceba. Ngokuphucula imfucu yokuphucula iifiber kwiigundane, i-GW i-501516 powder yenza ukhuseleko kwi-corpulence.
I-2) I-Cardarine Powder Iphucula Ukukhula Kwemisipha kunye neStamina
Ukuqaliswa kwe-PPARẟ ngokusebenzisa i-GW501516 kuqhuba ukuqhuma kwamafayili emisipha kwiigundane. Ezi ntambo ze-muscle zihambelana nokuphunyezwa komzimba okwandisiweyo. Baya kuhamba kabini ubude bezinye iigundane, babonise ukuqhubeka nokuqhubeka.
I-3) I-Cardarine Powder ikhusela iBongo
Kwizidalwa, iKardiarine Powder iqinisekisa iimpahla zengqondo xa ziphantsi kokuxhalabisa. Ukumenywa kwe-PPAR ngeCarardarine kungaqhuba ukuqhubela phambili kweeseli zesigulane (R). Kwakhona, ilindele ukuphuka kwesisu, ngakumbi kwimikhumbi ye-cerebrum.
I-4) I-Cardarine Powder izuze iNhliziyo
I-Cardarine Powder iphikisana nokulimala kwenzakalo entliziyweni. Iyanciphisa ingozi kunye nokunyaniseka kwe-atherosclerosis (uphuhliso lwama-plaque kwii-corridors) ngezixhobo ezahlukeneyo. I-GW 501516 ipowder ekhulisiwe amanqanaba e-nitric oxide, ekhusela i-atherosclerosis. Ngokufanayo kunciphisa izilonda kunye ne-aggravation ehlobene ne-atherosclerosis kwimicebe. I-GW 501516 powder yakha i-VEGF isizukulwana esivela kumaseli omzimba omntu, okubangela ukuphuhliswa kweseli kunye nesisu. Iziphumo zePardide zePowder ekwandiseni i-cholesterol ye-HDL kunye nokuxothwa kwe-triglycerides kwizidalwa zezidalwa, ngokucacileyo ukunciphisa ingozi yesifo senhliziyo kwizigulane.
5) I-Cardarine Powder ikhusela iiIso
Kwimichiza, kwabonakala kubhekisa ukucaphuka kwiiseli zezintso kwaye kunokukhusela isifo sesifo. Ukwenza oku ngokukhupha ukuxilongwa kwe-MCP-1 ekhoyo kwaye kwandiswe ngokubanzi kwizifo ezinjalo zesifo.
I-6) I-Cardarine Powder isiza i-System Immune System
I-GW 501516 powder inxulumene nokufihla ukucaphuka (R). Ukwenziwa kwePARAR kukhubaza ukucaphuka kwiibindi kwizidalwa ngokunqanda i-athomu ezifaka isandla kwisibindi somlilo (R). I-GW 501516 ipowder inokumisela iPARAR ekhusela iiseli ezithile zeplastiki ekubeni zingabonakali ukutshabalalisa iseli phakathi kwenkqubo yokulimala. Kwakhona kwabonakala ukuba kuvuselele ukulimala kwesifo sikashukela.
I-7) I-Cardarine Powder ikhusela ukulimala kwesibindi
I-PPARẟ eyenziwa yiCardiarine Powder yenza isibindi sitshintshe umthombo waso ovela kwi-glucose kuya kuma-acids acids, ngale ndlela iyanciphisa i-glucose. Kwiigundane, i-GW 501516 ipowder inqande i-IL-6, enokukunceda ukuphepha ukukhuselwa kwe-insulin kwiiseli zesibindi. Apha kwaye ngoku unokuguqula ingozi yesibindi eyayibangelwa i-fructose ephezulu idla iikhalori ezimbalwa. Ngokufanayo, inokuphucula ingxaki yokungabikho komnxeba kwimigundane.
8) I-Cardarine Powder Ingamnceda Uphilise Izifo Zesikhumba
Ukumenywa kwe-PPAR kunokunyusa ukugqithiswa okubangelwa yi-psoriasis (umba wesikhumba).
GW 501516 / Cardarine Ulwazi oluyisiseko Izinto ze-9 ofuna ukuzazi malunga neCarardarine powder !!! Kutheni sithenga i-LGD-4033 / VK5211 / Ligandrol powder kwi-AASraw? Izinto ze-9 ofuna ukuzazi malunga neCarardarine powder !!!
Thenga i-Masteron Propionate powder for bodybuilding: i-6 inyaniso kufuneka uyazi !!!	Thenga ukuhlambuluka okuphezulu Tadalafil powder online: Zonke izinto ufanele ukwazi !!!